phasic dopamine အချက်ပြမှု၏ဆုံးရှုံးမှု - စွဲလမ်းမှုအသစ်တစ်ခု (၂၀၁၄) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်
phasic dopamine အချက်ပြ၏ဆုံးရှုံးမှု: သစ်တစ်ခုစွဲအမှတ်အသား (2014)
နတ် neuroscience ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC 2016 ဇွန် 30 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
: နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ပုံစံထဲမှာရှိသကဲ့သို့ Published နတ် neuroscience ။ 2014 မေလ; 17 (5): 644-646 ။
Daniele Caprioli, Donna Caluနှင့် Yavin Shaham
ဆောင်းပါးကိုကြည့်ပါ။အဆိုပါ striatum အတွက်လျော့နည်းသွား phasic dopamine အချက်ပြထံမှအလွန်အကျွံကင်းအသုံးပြုမှုရလဒ်များကို"၌ နတ် neuroscienceစာမျက်နှာ 17 အပေါ်အသံအတိုးအကျယ် 704 ။
လေ့လာမှုတစ်ခုတစ် ventral အတွက် phasic dopamine signal ကိုဆုံးရှုံးသော်လည်းမ striatum ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတင်းမာမှုလျှော့ချခန့်မှန်းထားပါတယ် dorsal ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ L-DOPA နှင့်အတူ ventral striatum အတွက် phasic dopamine Restoring ဒီတင်းမာမှုနောက်ကြောင်းပြန်။ စွဲသီအိုရီနှင့်ကုသမှုဤရလဒ်များကို၏ဂယက်ရိုက်ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
dopamine စွဲတှငျအဘယျအခနျးကဏ်ဍသနည်း? ဤမေးခွန်းကိုပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်လေးခုအတွင်းမှာစွဲသုတေသန၏ရှေ့တန်းမှအတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤအချိန်ကာလအတွင်းမြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများ psychostimulant မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် conditional မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုအတွက် mesolimbic နှင့် nigrostriatal dopamine ဂီယာပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပါပြီ။ အပြိုင်ခုနှစ်တွင် ventral အတွက် dopamine ဂီယာနှင့် / သို့မဟုတ် dorsal striatum psychostimulant စွဲများအတွက်အရေးပါကြောင်းငြင်းခုန်သောအတော်ကြာထင်ရှားတဲ့ dopaminergic ဗဟိုပြုစွဲသီအိုရီ, 1-5, ပေါ်ထွက်လာပါပြီ။ ဤရွေ့ကားသီအိုရီအဓိကအားသင်ယူမှုဆုချဖို့အရေးပါအရာ, အစာရှောင်ခြင်း phasic dopamine ဂီယာ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကဲဖြတ်ရန်ဖို့ယာယီ resolution ကိုမတွေ့ရှိရပါသည်, အဲဒီ receptor ဆေးဝါးဗေဒနှင့် microdialysis နည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. လေ့လာမှုများမှဆင်းသက်လာခဲ့သည် 5, psychostimulant စွဲ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ၌တည်၏။ အစာရှောင်ခြင်း-စကင်၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ Vivo အတွက် Sub-ဒုတိယ phasic dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်နာတာရှည် implants microsensors ၏နောက်ဆက်တွဲဖှံ့ဖွိုးတိုးတတိုင်းတာရန် voltammetry6အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကြွက်ပြုမူအတွက် neurotransmitter လွှတ်ပေးရန်အတွက်အတက်အကျဆုံးဖြတ်ရန် Willuhn ခွင့်ပြုခဲ့ပါပြီ et al ။7ဤမေးခွန်းကိုဖြေရှင်းရန်။
ယခင်လေ့လာမှုမှာ 8အဆိုပါသုတေသနအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စွဲသီအိုရီသင်ယူခြင်းဟာ dopamine-based ထစ်အငေါ့အလေ့အထတစ်ခုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ခန့်မှန်းစမ်းသပ်ဖို့နာတာရှည် implants microsensor နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြု 5, ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး dopamine ထိန်းချုပ်မှုအချိန်ကျော် striatum dorsal မှ ventral ကနေပြောင်းရွှေ့ရသည်ကြောင်းစောဒကတက်ရာ။ သူတို့ကတစ်နေ့လျှင် 1 နာရီ (ကန့်သတ်ထား-access ကိုခွအေနအေ) ကို phasic dopamine signal ကိုများအတွက် Self-စီမံခန့်ခွဲကင်းဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားကြွက်များ၏ ventral striatum အတွက်ကိုကင်းဆေးထိုးဘို့လီဗာ-စာနယ်ဇင်းရက်သတ္တပတ် 1 နှင့်2အပေါ်ထက်ရက်သတ္တပတ်3အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့ချက်ချင်းပြီးနောက်တွေ့ရှိခဲ့ ။ ဆနျ့ကငျြ, phasic dopamine signal ကိုတပတ် 1 အပေါ် dorsal striatum အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာမခံခဲ့ရပေမယ့်ရက်သတ္တပတ် 2-3 စဉ်အတွင်းပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုစွဲသီအိုရီသင်ယူခြင်းဟာ dopamine-based ထစ်အငေါ့အလေ့အကျင့်ကိုထောကျပံ့။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု, Willuhn အတွက် et al ။7နောက်ထပ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူတို့ရဲ့ကင်းစားသုံးမှုတိုးမြှင့သို့မဟုတ်တင်းမာမှုများလျော့ပါးစေရန်ကြွက် (နေ့စဉ်6နာရီသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို) တိုးချဲ့ကင်း access ကိုပေးသည်ထားတဲ့အတွက်စွဲသက်ဆိုင်ရာ Self-အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်း အသုံးပြု. ဒီသြဇာသီအိုရီစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ဒါဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းလူသားတွေအတွက်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း, ကန့်သတ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကနေအလွန်အကျွံမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှအကူးအပြောင်းပုံစံထင်နေသည် 9။ တစ်ဦးကရိုးရှင်းတဲ့ခန့်မှန်းယင်းတိုးချဲ့-access ကိုတင်းမာမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းထဲမှာ, phasic dopamine signal ကို striatum dorsal မှ ventral ကနေ '' ရှိရာသို့အလျင်အမြန် '' လွှဲပြောင်းမည်, ကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့ရဲ့လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုသို့သော်ဒီခန့်မှန်းဆန့်ကျင်သို့ပွေးလေ၏။
အဆိုပါစာရေးဆရာကြွက်များ၏ ventral striatum (နျူကလိယ core ကိုဒေသ accumbens) နှင့် dorsal striatum (dorsolateral ဒေသ) သို့ voltametric လျှပ်ထဲထညျ့။ သူတို့ဟာပြီးတော့တိုတောင်း-access ကို 1 နာရီနေ့စဉ်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းသွေးကြောသွင်းကင်းဘို့နှာခေါင်း-ပြီးမှ (အနေနဲ့အော်ပရေတာတုံ့ပြန်မှု) ကို 1 ရက်သတ္တပတ်အဘို့ထိုသူတို့လေ့ကျင့်သင်ကြား; ကိုကင်းတာဟာတစ် 20-ဒုတိယသေံ-အလင်း cue နှင့်အတူတွဲခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆက်တွဲ3ရက်သတ္တပတ်အတွင်းကြွက်များကိုကင်းမှတိုးချဲ့,6နာရီနေ့စဉ်အသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့သည်။ ဤအ3ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာတော့စာရေးသူတစ်ဦးချင်းစီနှာခေါင်း-Poke တုံ့ပြန်မှုပြီးနောက်ချက်ချင်းပြ phasic dopamine တိုင်းတာ။ အဆိုပါ phasic dopamine signal ကိုမူးယစ်ဆေး-ဆက်စပ်တွေကိုရန်အေးစက် dopamine တုံ့ပြန်မှုကိုထင်ဟပ်ဖို့စဉ်းစားနေပါတယ် 6.
ရက်သတ္တပတ် 1 တွင်စာရေးသူချက်ချင်းအားဖြည့်နှာခေါင်း-Poke ပြီးနောက် ventral striatum အတွက် phasic dopamine signal ကိုလေ့လာတွေ့ရှိ; ဒီ signal ကိုတဖြည်းဖြည်းရက်သတ္တပတ်2နှင့်3စဉ်အတွင်းငြင်းဆိုခဲ့သည်။ အဆိုပါဒေတာများကိုအတည်ပြုခြင်းနှင့်ကင်းဖို့တိုတောင်း-access ကိုပေးသည်ကြွက်အဘို့မိမိတို့ယခင်တွေ့ရှိချက်များတိုးချဲ့ 8။ သို့သျောလညျး, (ကိုကင်းဖို့တိုတောင်း access ကိုစဉ်အတွင်း dorsal striatum အတွက်အချက်ပြ phasic dopamine ဘို့မိမိတို့ယခင်တွေ့ရှိချက်မတူဘဲအတွက်တိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်စဉ်အတွင်း phasic dopamine signal ကိုအားနည်းစွာဒုတိယပတ်အတွင်းပေါ်ထွက်လာခြင်းနှင့်လုံးဝတတိယပတ်အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားပုံ 1) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာ ventral အတွက် phasic dopamine အချက်ပြ၏ဆုံးရှုံးမှုသော်လည်းမ striatum ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတင်းမာမှုလျှော့ချခန့်မှန်းထားပါတယ် dorsal ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတင်းမာမှုလျှော့ချနေစဉ်အတွင်း phasic dopamine neurotransmission များအတွက်သုံးထင်ရှားတဲ့စွဲသီအိုရီ၏ခန့်မှန်းချက်နှင့်အတူ Willuhn et al.7 အားဖြင့် phasic dopamine အပြောင်းအလဲများအတွက် Vivo လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်။
အဆိုပါစာရေးဆရာကနောက်ထပ်နှင့်အတူဤကောက်ချက်ထောက်ခံ Post-hoc ပစ္စုပ္ပန်, တိုးချဲ့-access ကိုလေ့လာမှုနှစ်ခုလုံးအနေဖြင့်အချက်အလက်များ၏လေ့လာဆန်းစစ်7နှင့်ယခင်အတို-access ကိုလေ့လာမှု 8အဆိုပါ ventral အတွက် phasic dopamine အချက်ပြ၏ဆုံးရှုံးမှုသော်လည်းမ striatum နေ့စဉ်အသုံးပြုခွင့်အခြေအနေများ၏လွတ်လပ်သော, ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတင်းမာမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည် dorsal ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း။ တစ်နည်းမှာ 3-ရက်သတ္တပတ်ကာလအတွင်းတည်ငြိမ်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးထိန်းသိမ်းထားကြောင်းနှစ်ဦးစလုံးလက်လှမ်းမီအခြေအနေများကနေကြွက်များတွင်အချိန်ကျော် phasic dopamine signal ကိုအဘယ်သူမျှမအရှုံးရှိ၏။ စာရေးသူမှ additional ထောက်ခံမှု Pre-ဆိုးရွားလာခဲ့သည် '' အဆင့်ဆင့် '' နိဂုံးချုပ် L-DOPA, dopamine တစ်ဦးရှေ့ပြေး၏စနစ်တကျသို့မဟုတ် ventral striatum ထိုးသောလိုက်စားလေ့လာရေးဖြစ်ပါသည်, ကျဆင်းခြင်းမှကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုဆိုးရွားလာခဲ့သည် 'နှင့်သိသိသာသာ, L-DOPA ကိုလည်းပွနျလညျထူထောငျ ventral striatum အတွက် phasic dopamine signal ကို။ အတူတူယူရလာဒ်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကြောင်းအကြံပြုကြောင့်ဒီဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌အချက်ပြ phasic dopamine ၏ဆုံးရှုံးမှုတွင်ထင်ဟပ်သောညှိ ventral striatal dopamine function ကို, ရန်ဖြစ်ပါသည်။ Willuhn များ၏မျှော်လင့်မထားတဲ့ရလဒ်တွေကို et al ။7စွဲသီအိုရီနှင့်ကိုကင်းစွဲကုသမှုနှစ်ခုစလုံးအတွက်သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။
စွဲသီအိုရီနှင့် ပတ်သက်. ကျွန်တော်တို့ကိုရသောပစ္စုပ္ပန် data တွေကိုစွဲသီအိုရီသုံးခုသြဇာအတန်းနှင့်အတူ fit ဖို့ဒီဂရီထည့်သွင်းစဉ်းစားကြကုန်အံ့: မက်လုံးပေးာင်း 3, ထစ်အငေါ့အလေ့အထသင်ယူမှု5နှင့်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်ကို 10 (ပုံ 1) ။ အဆိုပါမက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတင်းမာမှုမူးယစ်ဆက်စပ်တွေကိုမှမြင့် ventral striatal dopaminergic တုံ့ပြန်မှုသည် Willuhn တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်ဘက်သော predication နှင့်ဆက်နွယ်လိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်း et al ။ ဒေတာ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, dopamine-based ထစ်အငေါ့အလေ့အထစွဲသီအိုရီသင်ယူခြင်း5ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတင်းမာမှုဒီခန့်မှန်းဖြစ်စေအတည်ပြုခဲ့သည်မခံခဲ့ရ, မူးယစ်ဆက်စပ်တွေကိုမှမြင့် dorsal striatum dopaminergic တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်လိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, ပြိုင်ဘက်-ဖြစ်စဉ်ကိုသီအိုရီမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏ကိုကင်းနှင့်တင်းမာမှုလျှော့ချဖို့တိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ဆက်နွယ်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ခန့်မှန်း, သာမန်မှအချက်ပြ dopamine restore ငှါရှာကြံကင်းမောင်းတစ်ဦး dysphoric ဆုတ်ခွာဖို့ဦးဆောင်မှုကြောင့်တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါး-သွေးဆောင် hypodopaminergic ပြည်နယ်မှ phasic dopamine အချက်ပြယုတ်လျော့ မူးယစ်ဆေး-နုံအဆင့်ဆင့် 10, 11။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ Willuhn ကနေရလဒ်ပေါ်အခြေခံသည်ဤသီအိုရီများမဆိုစွန့်လွှတ်ရန်စောလွန်းသည် et al ။သူတို့၏လေ့လာမှုသာ presynaptic dopamine ဂီယာများထဲမှအကောင်အထည်ဖော်မည်ဟုဆိုသည်အကဲဖြတ်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, အကဲဖြတ်နေ့စဉ် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအစည်းအဝေးများမှကန့်သတ်ခဲ့ကြသည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုအနာဂတ်သုတေသနအတွက်မေးခွန်းတွေတင်ပြထားတယ်။ တဦးတည်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ventral နှင့် / သို့မဟုတ် dorsal striatum အတွက်အချက်ပြသည့် phasic dopamine ကိုကင်းတွေကိုရန်တုံ့ပြန်မှုတဖြည်းဖြည်းအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတိုးပွါးလာသောအခါ abstinence ၏ကာလအတွင်းမှာ re-ပေါ်ထွက်လာမယ်လို့ရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကို ventral striatum phasic dopamine signal ကို၏ဆုံးရှုံးမှုကို opiate (ဥပမာ, ဘိန်းဖြူ) Self-အုပ်ချုပ်ရေးတင်းမာမှုလျှော့ချခန့်မှန်းမယ်လို့ရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ သက်သေအထောက်အထား ventral striatum dopamine ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှမပါကြောင်းအကြံပြုသည့်အတိုင်း 12ကြှနျုပျတို့သညျဤအမှုမဖွစျစခွေငျးငှါကြိုတင်ခန့်မှန်း။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ L-DOPA ၏နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေး၏လိုက်စားရလဒ်များကို Willuhn ခြင်းဖြင့်သရုပ်ပြ et al ။7ကိုကင်းစွဲများအတွက်ဆေးဝါးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။ ကိုကင်းစွဲအဘို့အဘယ်သူမျှမ FDA ကထောက်ခံချက်ပေးထားတဲ့ဆေးဝါးအဖြစ်သေးရှိပါသည်။ သို့သော်အများအပြားလက်တွေ့လေ့လာမှုများ agonist-based အစားထိုးကုသမှု (ဥပမာ, ဆေးညွှန်းပါးစပ်စိတ်ကြွဆေး) တရားမဝင်ကင်းအသုံးပြုမှုလျော့ကျကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြ 13။ Willuhn ၏ဒေတာ et al ။7ဒီ agonist-based ကုသမှုနည်းလမ်း၏ utility ကိုများအတွက်အပိုဆောင်း preclinical သက်သေအထောက်အထားသည်။
ပုံ 1 Willuhn အားဖြင့် phasic dopamine အပြောင်းအလဲများအတွက် Vivo လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် et al ။7ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတင်းမာမှုလျှော့ချနေစဉ်အတွင်း phasic dopamine neurotransmission များအတွက်သုံးထင်ရှားတဲ့စွဲသီအိုရီ၏ခန့်မှန်းချက်နှင့်အတူ။ မက်လုံးပေး-sensitive (အပြာရိပ်), ထစ်အငေါ့-သင်ယူမှုသီအိုရီ (လိမ္မော်ရောင်ရိပ်) နှင့်ပြိုင်ဘက်-ဖြစ်စဉ်ကိုသီအိုရီ (အနီရိပ်) အဖြစ် Willuhn များ၏လေ့လာတွေ့ရှိ phasic dopamine ပြောင်းလဲမှုများကိုအဘို့ခန့်မှန်းချက် et al ။ အဆိုပါ ventromedial striatum (VMs, အပြာဦးနှောက်ဧရိယာနှင့်ခြေရာတွေ) နှင့် dorsolateral striatum (DLS, အနီရောင်ဦးနှောက်ဧရိယာနှင့်ခြေရာတွေ) အတွက် (စိမ်းရိပ်, ရဲရင့်ခြေရာတွေ) ။ Phasic dopamine signal ကိုတစ်ဦးသေံ-အလင်း cue နှင့်အတူတွဲနေတဲ့ကိုကင်းပြုတ်ရည်၏ပေးပို့မှုအရာကြွက် '' အားဖြည့်နှာခေါင်း-Poke တုံ့ပြန်မှုအပေါ် (အချိန် 0) aligned ဖြစ်ပါတယ်။ သီအိုရီဟောကိန်းများနှင့်ဆက်စပ်အားလုံးခြေရာတွေကိုမသိဘဲရမ်းမေးတဲ့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပင်ကိုယ်မူလခြေရာတွေ Willuhn များ၏တွေ့ရှိချက်များ၏ကိုယ်စားလှယ်များမှာ et al ။ ထိပ်တန်း: ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှတိုးချဲ့ 1 နာရီလက်လှမ်း၏ရက်သတ္တပတ်6။ အလယျပိုငျး: ရက်သတ္တပတ်2။ အောက်ခြေ: ရက်သတ္တပတ်3။ VMs အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာ dopamine အပြောင်းအလဲများကိုအများဆုံးနီးကပ်စွာပြိုင်ဘက်-ဖြစ်စဉ်ကိုသီအိုရီ၏ခန့်မှန်းချက်ကိုက်ညီမှုမရှိပါ။ CC ကို, Corpus callosum ။ တွင် မက်လုံးပေး-sensitive သီအိုရီ, စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများအခင်းအကျင်းနှင့်တွေကိုမှမက်လုံးပေး salience attributes သော mesolimbic dopamine စနစ် dopamine neurotransmission တိုးမြှင့်။ အဆိုပါ dopaminergic စနစ်ကြာရှည်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်မူးယစ်ဆေးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ဆက်စပ်တွေကိုက hypersensitive ဆပ် 2-4, တွင် ထစ်အငေါ့-သင်ယူမှု သီအိုရီ, မူးယစ်ဆေးဝါးမှထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ ventral striatum အတွက်လုပ်ရပ်တွေကိုမှတဆင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ဆက်စပ်တွေကိုမှ Pavlovian နှင့်ဆာပတုန့်ပြန် heightens 4, dorsal striatum 14 သို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံး 5, 15။ အဆိုပါကြီးထွားတုန့်ပြန်မူးယစ်ဆေးရှာကြံနှင့်ယူပြီးထိန်းချုပ်အတွက်တိုးတက်သော dopamine-မှီခို ventral-to-dorsal striatal ပြောင်းကုန်ပြီကကမကထပြုခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကို, ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များကြားမှဆက်လက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှဦးဆောင်ရလဒ်ကိုတန်ဖိုးမှအာရုံမခံစားနိုင်သောဖြစ်ပါသည် 5, တွင် ပြိုင်ဘက်-ဖြစ်စဉ်ကို သီအိုရီများ၊ ကန ဦး မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းကိုအဓိကအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကထိန်းချုပ်ထားသည်၊ သို့သော်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသည် mesolimbic dopamine ဆုလာဘ်စနစ်၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလျော့နည်းလာခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အဆင့်ဆင့် 10, 11။ မှတ်ချက်: ဤအသီအိုရီသာ ventral striatum dopamine နှင့် ပတ်သက်. တိကျသောဟောကိန်းများကိုဖန်ဆင်းသောကွောငျ့ကြှနျုပျတို့မက်လုံးပေး-sensitive သီအိုရီအဘို့အ dorsal striatum အတွက် dopamine signal ကိုခန့်မှန်းညွှန်ပြကြဘူး။
1 ။ ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA, Bozarth MA ။ စွဲလမ်းတစ် psychomotor လှုံ့ဆော်သီအိုရီ။ Psychol ။ ဗျာ 1987; 94: 469-492 ။ [PubMed]
2 ။ Stewart က J ကို, က de ကျေး H ကို, opiates နှင့်စိတ်ကြွဆေး၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ခြွင်းချက်မရှိနှင့်အခြေအနေများကိုမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ၏ Eikelboom R. အခန်းက္ပ။ Psychol ။ ဗျာ 1984; 91: 251-268 ။ [PubMed]
3 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏အာရုံကြောအခြေခံ: စွဲတစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive သီအိုရီ။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 1993; 18: 247-291 ။ [PubMed]
4 ။ dopamine-မှီခိုဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုရောဂါအဖြစ် di Chiara G. အမူးယစ်ဆေးစွဲ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 1999; 375: 13-30 ။ [PubMed]
5 ။ Everitt BJ, Dickinson တစ်ဦးက, Robbins TW ။ စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူ၏ neuropsychological အခြေခံ။ ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 2001; 36: 129-138 ။ [PubMed]
6 ။ Clark က JJ, et al ။ တိရိစ္ဆာန်များပြုမူအတွက် longitudinal, subsecond dopamine ထောက်လှမ်းဘို့နာတာရှည် microsensors ။ သဘာဝတရားနည်းလမ်းများ။ 2010; 7: 126-129 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
7 ။ Willuhn ငါ LM B, Groblewski PA ဆိုပြီး, Phillips က Pem ။ အဆိုပါ striatum အတွက်အချက်ပြယုတ်လျော့ phasic dopamine ကနေအလွန်အကျွံကင်းအသုံးပြုမှုရလဒ်များကို။ နတ် neuroscience ။ 2014 ဤပြဿနာ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
8 ။ Willuhn ငါ Burgeno LM, Everitt BJ, Phillips က PE ။ ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်း၏တိုးတက်မှုစဉ်အတွင်း striatum အတွက် phasic dopamine အချက်ပြ၏ hierarchical စုဆောင်းမှု။ အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2012; 109: 20703-20708 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
9 ။ Ahmed က SH, Koob gf ။ အလယ်အလတ်ကနေအလွန်အကျွံမူးယစ်စားသုံးမှုမှအကူးအပြောင်း: hedonic set ကိုအမှတ်အတွက်ပြောင်းလဲမှု။ သိပ္ပံ။ 1998; 282: 298-300 ။ [PubMed]
10 ။ Koob gf, Le Moal အမ်မူးယစ်ဆေးစွဲ, ဆုလာဘ်၏ dysregulation နှင့် allostasis ။ Neuropsychopharmacology ။ 2001; 24: 97-129 ။ [PubMed]
11. Dackis, CA, ရွှေက MS ။ ကိုကင်းစွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာအယူအဆအသစ်များ - Dopamine Depletion Hypothesis ။ အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့် Biobehavioral ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ 1985; 9: 469-477 ။ [PubMed]
12 ။ Badiani တစ်ဦးက, ဘီးလင်း: D, Epstein: D, Calu: D, Shaham Y. Opiate psychostimulant စွဲနှိုင်းယှဉ်: ခြားနားချက်များအရေးပါဘူး။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 2011; 12: 685-700 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
13 ။ et al Grabowski J ကို။ Agonist ကဲ့သို့သို့မဟုတ်ဘိန်းဖြူမှီခိုဘို့ methadone နှင့်အတူကင်းမှီခိုဘို့ရန်တူသောကုသမှုနှစ်ခုကို double-မျက်စိကန်းသောကျပန်းလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေ။ Neuropsychopharmacology ။ 2004; 29: 969-981 ။ [PubMed]
14 ။ White ကမိုင်။ စစ်ကူအဖြစ်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ: မှတ်ဥာဏ်စနစ်တွေအပေါ်မျိုးစုံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလုပ်ရပ်တွေကို။ စွဲလမ်း။ 1996; 91: 921-949 ။ ဆွေးနွေးမှု 951-965 ။ [PubMed]
15 ။ Jentsch JD, တေလာ JR ။ ဆုလာဘ်-related လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်အမူအကျင့်များထိန်းချုပ်ရေးအတွက်သက်ရောက်မှုတွေ: မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် frontostriatal ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေရရှိလာတဲ့ Impulse ။ Psychopharamacology ။ 1999; 146: 373-390 ။ [PubMed]